Fahafatesana jiolahy :: Mpangalatra voatifitra tao antranon’ny tale jeneralina minisitera • AoRaha
Fahafatesana jiolahy Mpangalatra voatifitra tao antranon’ny tale jeneralina minisitera
Tsy nitsitsian’ny mpiambina bala ity jiolahy nanafika tao an-tranon’ny tale jeneralin’ny minisitera iray, monina eny Ambohimitsimbina, omaly tokony ho tamin’ny 1 ora maraina latsaka. Maty tsy tra-drano ny iray tamin’ireo olon-dratsy. Tafatsoaka niaraka tamin’ny basy poleta kosa ireo namany.
“Tsy nitsahatra naharay fandrahonana hatrany io tale jeneralina minisitera lehibe iray eny Antaninarenina io, tato anatin’ny andro maro izao. Nanao fangatahana mpiambina tamin’ny foibe fibaikoana ny Zandarimaria izy ka nandefasanay olona hiambina tany, andro sy alina. Nitranga tokoa ny fanafihana tamin’ny alina. Henonay vantany vao tonga ireo jiolahy. Nasaina nijanona sy hitolobatana tamin’ny feo mahery saingy vao mainka ry zareo nitifitra. Raikitra ny fifampitifirana. Izahay rahateo efa vonona. Vao nahita ny iray lavo voatifitra tsy afa-nitsoaka ireo namany dia nanao taridositra”, araka ny fitantaran’ireo zandary niambina ilay tale jeneraly.
Tonga vetivety teny Ambohimitsimbina ny mpitandro filaminana maro avy amin’ny polisy sy ny zandary. Nigadona teny ihany koa ny polisy misahana ny heloka bevava . Nisy ny fikarohana ny teo amin’ny manodidina ny trano saingy tsy nisy tratra ireo mpanafika izay tafatsoaka. Hita tsy lavitra teo ny taimbala roa avy amin’ny basy poleta efa tsy misy ahafantarana azy intsony. Tsy nisy naratra na entana voaroba kosa tao amin’ny tranon’io tale jeneraly io.